Kooxda Manchester United oo bedelka laacibkeeda khadka dhexe ee Paul Pogba ka dhex heshay Barcelona – Gool FM
(Manchester) 30 Luulyo 2019. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay calaamadeysatay raaca dhisaha kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic si ay bedel uga dhigtaan booska uu baneyn doono xiddiga u baxsanaya xirashada maaliyadda cad ee Real Madrid, Paul Pogba.
Real Madrid ayaa si weyn diiradda u saarreysa soo iibsashada joog dheeraha reer France ee Paul Pogba, kaas oo isna ka hadlay suurta-galnimada uu ugu dhaqaaqi karo koxoda ku ciyaarta garoonka Bernabeu kuna tilmaamay riyo rumoobi karta xilliyada soo aaddan.
Paul Pogba iminka waa xidig ka tirsan kooxda Man United, balse wararka qaar ayaa soo jeedinaya in la joogo waqtigii ay Red Devils raadsan lahayd bedelkiisa waana wax dhacaya haatan, maadaama ay kooxdiisa xiiso u muujinayso Ivan Rakitic oo laftiisa aan hubin booskiisa kooxda Barcelona ee xilli ciyaareedka cusub.
Rakitic waxaa lagu qiimeeyaa adduun dhan 45 milyan oo gini, waxaana ay kooxda reer Catalonia soo dhowayn doontaa haddii ay dalabyo laga soo bandhigo xiddigaan reer Croatia, iyagoo raadinaya inay yareeyaan tirada xiddigaha ku sugan kooxdooda ee sii gaboobaya.
Man United ayaana la fahamsan yahay in ay la hadleyso kooxda Barcelona xilli dhaw, maadaama ay kaliya haystaan sagaal maalmood oo ah tirada maalmaha ka dhiman in la damiyo suuqa kala iibsiga England.
Pogba ayaa loo arkaa xiddiga ugu muhiimsan kooxda Man Utd, balse ku qanacsanaan la’aantiisa kooxda ka dhisan magaalada Manchester ayaa soo dedejineysa in Man United raadiso badlkiisa.
Rakitic ayaa ka mid ahaa xiddigihii gaaray bar dhammaadka koobkii adduunka ee sandkii tagay 2018, waxaana jira suurta-galnimo uu ku bedelan karo kooxdiisa Barca oo ay u badantahay in ay ka maarmaan sabab la xiriirta da’diisa, inkastoo uu xal u noqon karo khadka dhexe ee Manchester United sababo la xiriira waayo-aragnimadiisa.
Waa maxay waxa xun ee ku dhacay Messi-ga Jarmalka ee Mario Götze & Hadalkii layaabka lahaa ee macallin Joachim Löw!